Kodi 18.8 inosvika iine nhau diki kugadzirira kuuya kwe "Matrix" | Linux Vakapindwa muropa
Kodi 18.8 inosvika iine nhau diki kugadzirira kuuya kwe "Matrix"
Mwedzi yakati wandei yapfuura, ivo vagadziri veiyo software yaimbozivikanwa seXBMC vakakanda iyo v18.7 ye software yayo ine yakazara rondedzero yeshanduko, pakati payo yatinogona kuratidza odhiyo, skrini uye interface mhinduro uye kuwedzera-kuenderana. Maawa mashoma apfuura ivo vaparura gadziriso nyowani, iyi ine shanduko diki, asi nechikonzero: kana pasina kushamisika kana matambudziko ekugadzirisa, Kodi 18.8 chichava chekupedzisira kugadzirisa icho Leia achave nacho.
Mune iyo Kodi 18.8 kuburitsa noti Leia ataurawo chimwe chinhu: kuburitsa iyi vhezheni nezviri kutarisirwa kuve zvekupedzisira kubata, iyo yekumisikidza timu ino tarisa kuedza kwavo pa Kodi 19, iyo ichave iine yekodhi zita «Matrix». Ivo havana kupa zuva rekuburitsa, asi isu tinofanirwa kukurumidza kuona mune yavo kurodha peji iyo 19.0 yeWindows ichava beta, uye kwete alpha sepakutanga. Pazasi iwe une runyorwa rwemashoko akasvika neKare 18.8.
1 Kodi 18.8 inosimbisa
Kodi 18.8 inosimbisa
Inogadzirisa chakakomba chengetedzo nyaya mumanyosi.
Mamwe makuru kuraibhurari / kuenderana kugadziridzwa.
Iwe unowana mutengi / sevha paMariaDB 10.5.4 iyo inoshanda paApple.
Gadzirisa vhidhiyo dhatabhesi kuwana yeUbuntu 20.04 uye kumwe kugovera uchishandisa shanduro dzekare dze libfmt (tsvaga uye mamwe mafirita akakundikana).
Gadzirisa kubata zvinyorwa zvidiki kubva kumafaira.
Rongedza kuwana CDDB.
Inoita zvidiki zvigadziriso kumatanda uye ndangariro yekuzivisa / kuona.
Gadzirisa EDLs uko kusvetuka mapoinzi ari pakutanga kwefaira.
Iine kodhi inowedzera yekugadzirisa chaiwo zviitiko, senge EPG mamiriro emujaho kana "kumbomira" pakupera kwekutepfenyura paApple.
Bvumira alpha kusanganisa yevhidhiyo player (Windows).
Anobata akasarudzika akasarudzika (Android, kazhinji).
Tinogona kuisa Kodi 18.8 uye ese emangwana vhezheni nenzira dzakasiyana. MuLinux, iyo Flatpak vhezheni inomira pachena kuti tinogona kuisa zvakananga nekudzvanya pa Iyi link kana kugovera kwedu kuchisanganisira rutsigiro kana isu takawedzera. Hongu zvirokwazvo, software v18.8 haina kusvika panguva yekutsikisa ichi chinyorwa. Kana iyo Snap vhezheni haina kusvika, kunyanya isiri yepamutemo iyo yavanogadzira kubva mudura reprojekti iyo inogona kuiswa nekuvhura terminal uye nekunyora murairo "sudo snap install mir-kiosk-kodi" (pasina makotesheni).
Chinhu chepamutemo chakapihwa neiyo projekiti inzvimbo inogona kushandiswa mukugovera seDebian kana Ubuntu. Kuwedzera nekuisa Kodi isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kodi 18.8 inosvika iine nhau diki kugadzirira kuuya kwe "Matrix"
Maitiro ekushandisa manyore WebRender muFirefox, seMozilla inoramba ichikanganwa nezvevashandisi veLinux
GRUB2 uye Yakachengeteka Boot: hutsva hutsva hunonzi BootHole hunowanikwa